Xuseen Nuuriyow ” Reer Norwey wixii ay uga baahdaan gobolka Banaadir aniga ayaa ka caawinaya“ | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Xuseen Nuuriyow ” Reer Norwey wixii ay uga baahdaan gobolka Banaadir aniga...
La taliyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ee dhanka arimaha bulshada Al fanaan Xuseen Nuuriyow ayaa sheegay in uu diyaar u yahay fududeynta adeegyada ay Jaaliyadda Soomaalida Norwey uga baahdaan maamulka gobolka Banaadir.
kadib xaflad casho sharaf iyo sogootin isugu jirtay oo xalay loogu qabtay Magaalada Olso ee dalka Norwey boqorka shiribka Xuseen Nuuriyow, dhawaana kasoo laabtay dalka si uu halkaan uga qeyb galo xaflado dhowr ah oo ay ka mid aheyd xafladii 1-da Luuliyo ayuu sheegay in maalmaha soo socda uu dib ugu laaban doono dalkii hooyo halkaas oo uu ka hayo xil muhiim ah.
Nuuriyow waxa uu uga mahadceliyay qaar ka mid ah Jaaliyada Norwey kasoo qeyb galkoodii xafladii xalay, waxaana uu u balan qaaday in uu ka garab ku siin doono howlaha ay uga baahdaan xarunta maamulka gobolka Banaadir iyo gudoonkeeda.
”cid kasta oo Norwey ka socota ee wax uga soo baahata maamulka gobolka Banaadir ama dalka dib ugu soo laabata wey u furnaan doona albaabada xarunta gobolka Banaadir inta aan anigu ahay la taliyaha Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee arimaha bulshada“ ayuu yiri Nuuriyow.
Isaga oo sii hadlayay ayuu ugu baaqay jaaliyadda iyo ganacsatada Norwey in ay dalkii dib ugu laabtaan islamarkaana maalgashi ku sameystaan dalka hooyo oo uu tilmaamay in ay xiligaan ka jiraan fursado wanaagsan oo dhinac kasta leh.
Xafladaan Sidoo kale waxaa ku sugna Farxiyo Mire oo ah gabar samafale ah oo degan dalka Talyaaniga waxayna reer Norwey ku amaantay sida ay mar weliba dadkooda kor ugu qaadaan.
Saxafiyiin rugcadaayaal oo ay ka mid ahaayeen Bashiir Gaani oo ahaa wariyihii madaxweyne Hassan Sheekh iyo Mohamed Abdi Nahar oo ah milkiilaha Qurbaha.net kana soo shaqeeyay Shabelle Media Network iyo Salaad Daacad oo ka mid ahaa bahdil Idaacadii Quraanka ayaa goob joog ka ahaa xafladaan.
Heeso dhowr ah ayuu ugu dambeyn fanaanku ku sogootiyay Reer Norwey oo ay ka mid aheyd Xurmo Badan Banaadir.
Previous articleFarxiyo Mohamed oo ah gabar samafale ah oo lagu soo dhoweeyay Norwey.
Next articleCiyaaraha Tokyo : Waa tumaa gabadhii u awood sheegatay Ramla Cali?